Mariazy ho an’ny Rehetra : Ahoana ny Eritreritr’ireo Ivoariana ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2013 3:42 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Italiano, Español, Français
Lany tao Frantsa tamin'ny herinandro lasa teo ny lalàna “mariazy ho an'ny rehetra” izay manome alalana ny fanambadiana na eo amin'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy. Ny adi-hevitra mafana vay sy nampitain'ny fampielezam-baovao miteny frantsay naharitra ambolana no nanery ny firenena Afrikana hiresaka momba azy io.
Efa maro sahady ny Filazam-baovao no nitantara ireo lehilahy afrikana tatsimo roa nanao fanambadiana ara-pomban-drazana.
Saingy ho an'ny Afrika miteny frantsay, izay mbola mandrara hatrany ny fiarahan'ny mitovy fananahana ny ankamaroan'ny firenena ao aminy, dia tsy misy maka tahaka ny tranga.
Lasa fampihomehezana kosa ny raharaha ao Abidjan. Fanaovana hatsikana ity lohahevitra ity ao amin'ny pejy Facebook, amin'ny alalan'ny tsy firesahana mivantana momba ny fifindra-monina amin'ny alalan'ny famondronana ny fianakaviana:
Lany ny mariazy ho an'ny rehetra ao Paris, korana eny amin'ny lalana sasan'ny Babi. Afaka manambady ny rahalahiny ABLO izany i Djo rahalahin'i Madou ary miaraka aminy any Bengue, azo antoka ny fahafahan'ny rahalahy DIGBEU manambady ny namany SERI any PARIS…
Iray amin'ireo firenena vitsy ao amin'ny renim-faritra tsy heloka ny homosexualité i Cote d'Ivoire. Ao amin'ny Youtube anefa dia nilaza ny ahiahiny sy ny tahony ihany amin'ny fomba fijery tonitony ny mpiserasera ivoariana.
Na izany aza, tahaka ny Afrikana maro koa, dia mbola maro ireo Ivoariana no naneho ny tsy fahazoany ny fiarahan'ny mitovy fananahana sy ny fiantraikan'ny mariazy pelaka.
Manantena aho fa ho avy ny fahazoana manambady maro. Eny, izany ihany koa ny mariazy ao Frantsa sy any an-kafa
Ny dingana manaraka dia ny fanangananana ny zanak'ireo mpivady ara-dalana. Pfff Tsy misy ilàna azy#directAN
Mbola mizaka herisetra maro ireo pelaka, eto Afrika, ary ahiana hisy hamono mahafaty aza : ohatra amin'izany ny fitsaram-bahoaka ao Cameroun. Mbola voararan'ny lalàna ny fiarahan'ny mitovy fananahana ao amin'ny firenena 40 eto afrika, ka ny tena henjana amin'izany ny ao ‘Ouganda sy Libéria [mg].